Uma sikhuluma ngamazambane, izitsha ezivela kule mifino zijabulisa kuphela ngokuhluka kwayo. Kodwa ngeke sibhale bonke, kodwa sizoxoxa ngendlela yokulungisa umqulu wamazambane ngamakhowe. Ngakolunye uhlangothi, lesi sidlo asikwazi ukubizwa ngokuthi sihle kakhulu. Ngakolunye uhlangothi, isikhathi esichitha ukuyilungisa kufanelekile. Abanikazi bezindlu bazothatha umqulu wamazambane ngamakhowe ngesifiso esikhulu, kuyilapho bedumisa amakhono akho okugaya.
Ngakho-ke, ukuze ulungise umqulu wamazambane, uzodinga amakhowe amasha angaphezu kwama-grams amathathu. Ngalokhu, ungasebenzisa amakhowe noma amakhowe ama-oyster. Ayikho umehluko omkhulu. Khetha lezo amakhowe ezifanele kakhulu ukunambitheka kwakho. Ukwengeza, ukubeka isitimela kanye kanye nekhanda elilodwa le-anyanisi, iqanda elilodwa namafutha yemifino. Ungakhohlwa ngosawoti nofulawa. Usawoti ufaka ukunambitheka, futhi ufulawa kuyadingeka ukwenza inhlama. Hhayi, futhi yiqiniso, amazambane ngokwawo. Uma uthatha izimpande ezinkulu, khona-ke izingcezu ezine kuphela zizokwanela.
Futhi manje silungiselela umqulu wamazambane ngamakhowe. Okokuqala ulungiselele amazambane. Geza, uwuqhube bese uwubeka esitofu segesi. Ukuze ijubane le nqubo, izitshalo zezimpande zinganqunywa zibe izingxenye eziningana. Uma amazambane esekulungele, cwilisa amanzi, usawoti bese upheka amazambane ahlambulukile, bese uvumele upholile.
Futhi ukuze ungachithi isikhathi ngeze, funda umatasa ngenkathi ugoqa. Uma ukhethe ama-mushroom, khona-ke ahlanjululwa kangcono, okungukuthi, susa izikhumba eziphezulu kusukela ku-bonnet. Kulokhu, ngeke balahlekelwa ukunambitheka kwabo. Futhi ngisho nangaphambene nalokho, kuyoba yiphunga elimnandi kakhulu. Ama-mushroom e-oyster amane ahlanzwe kahle ngaphansi kwamanzi asebenzayo. Manje usike amakhowe njengento encane ngangokunokwenzeka, bese uwabeka epanini elitholakalayo. Fry the amakhowe ngomlilo kancane.
Ngalesi sikhathi, thatha i-bulb, uyifake futhi uthathe ama-cubes amancane. Ngemuva kwemizuzu eyishumi nanhlanu, engeza u-anyanisi ku-brazier ngamakhowe, bese uqhubeka uheha inhlanganisela yemifino eholela, evuselela ngezikhathi ezithile.
Sibuyela futhi ku-puree yethu, eseyifinyelele ekushiseni esikudingayo. Siphuka iqanda elilodwa kulo, faka izipuni ezintathu noma ezine zofulawa bese uxuba kahle. Ngenxa yalezi zenzo, inhlama itholakala.
Vula i-ovini bese uyivumela ukuthi idume kuze kube yizicucu eziyikhulu namashumi ayisishiyagalolunye. Beka ucezu lwesibhakabhaka epayipi lokubhaka, likhulu kakhulu kune-foil. Kusuka endaweni engenhla inhlama yethu yamazambane kanye nokusabalalisa ukusabalalisa eceleni kwesikhumba, okumele sifafazwe ngamanzi kuqala. Uma kungenjalo, amazambane ahlambulukile azonamathela bese enza umqulu ngeke uphumelele. Ngenhloso efanayo, cwilisa emanzini nasezandleni.
Ukulungele ukupholisa ukugxila kufaka yonke indawo ye-rectangle yethu yamazambane. Ngakolunye uhlangothi, shiya igebe elingamamitha angaphezu kwamahlanu. Uma kungenjalo, amakhowe azophuma, futhi aphule konke ukubukeka kwesidlo esihle kangaka, njengomqulu wamazambane ahlambulukile.
Kuncane kakhulu okusele. Fitanisa isifiso oyifunayo bese ugcoba umqulu phezulu nge-egg yolk. Beka ehhavini elishisayo ngaphambi kwemizuzu engamashumi amane kuya kwamashumi amahlanu. Okwamanje, amazambane ethu ama-mushroom azobe esilungele, singenza ukulungiselelwa kwetafula.
Ngendlela, ungakhonza lesi sidlo nge- sauce omuncu omuncu, okuyinto enzima ukupheka nhlobo. Udinga isigamu seglasi ukhilimu omuncu, isipuni esisodwa sefulawa, ingilazi eyodwa yemifino noma umhluzi wenyama, isipuni samafutha, pepper kanye nosawoti ukunambitha.
Hlanganisa ufulawa kanye namafutha epanini elitshisayo, bese ufaka umhluzi, ukhilimu omuncu bese upheka ingxube eholayo ekushiseni okuphansi okungaphezu kwemizuzu eyisikhombisa. Esikhathini sokugcina, usawoti kanye nosawoti ukhilimu omuncu ukhilimu. Ungangeza imifino emincane. Kodwa lena isivele i-amateur.
Sekuyisikhathi sokuthola i-potato roll kusuka kuhhavini, usike izingxenye ezincane, uthele nge-sauce omuncu futhi ujabulele ukunambitheka okumnandi kwalesi sidlo!
Ikhekhe nama-apricot omisiwe
Ukupheka kwamaqebelengwane ashizi nge-manga: kuhhavini nokutholwa kwendabuko
Uhlelo MBA. Izinkinga izinganekwane futhi aliziphikisi
Ingabe Ukuthandaza kunisiza ukuheha emalini nasempumelelweni ngokwezinto?